Times24 Nepal » फेरि आयो लोक दोहोरीमा तहल्का मच्चाउने बिष्णु माझिको मार्मिक गीत साह्रै मन अत्याउनी / भिडियो
फेरि आयो लोक दोहोरीमा तहल्का मच्चाउने बिष्णु माझिको मार्मिक गीत साह्रै मन अत्याउनी / भिडियो
केही समय यता नेपाली सांगितीक बजारमा लोक दोहोरी गितले निकै तहल्का मच्चाई छ । यसै बेला पुण अर्को उत्कृष्ट लोक दोहोरी गीत साह्रै मन अत्याउनी को छायांकन सकिएको छ। प्रदिप अधिकारीको शब्द शृजनामा तयार भयको गीतको लय शृजना ध्रुबराजा धिताल ले गरेका छन भने गीतमा बिक्रम मल्ल र बिष्णु माझीको समधुर स्वर रहेको छ।
सार्वजनिक हुनु पुर्वनै गीतको चर्चा चल्न थालेको छ। शर्जक अधिकारीले गीतको पहिलो पोष्टर आफ्नो फेसबुकमा शेयर गरे संगै निकै उत्कृष्ट प्रतिकृया आइ रहेको पाईको छ। सु न्दा नाचौ नाचौ लाग्ने यो गीतले फेरी एक चोटी नेपाली सांगीतीक बजारमा तहल्का पिट्न सक्ने देखीन्छ।
यो पनि पढौ ! सफलता के हो? कसरी सफलता हासिल गर्ने?
सामान्यतया मानिसहरुले धनसम्पति कमाउनु, नोकर चाकर राख्नु र अरुलाई आफ्नो पक्ष र वशमा राख्नुलाई सफलता ठान्दछन। तर सफलता यो भन्दा धेरै भिन्न कुरा हो। माथी इड्विन सी. ब्लिसले भनेझै सफलता भनेको लडाईमा विजय पाउनु मात्र होइन, सिङ्गो युद्ध जित्नु हो। यहाँ हामीलाई लडाई र युद्धमा के फरक छ भन्ने कुरामा अलमल नहोस भनेर यी दुई बीचको फरक छुट्याउन आवश्यक ठान्दछु।
युद्ध भनेको दुई वा दुईभन्दा बढि विशाल मतभेदबीचको द्धन्द्ध हो। अर्थात दुई परस्पर विरोधी विचारबीचको टकराब हो भने लडाई भनेको यस्ता मतभेद र परस्पर विरोधी विचारबीच कुन सहि र गलत हो भनेर छुट्याउन गरिने ससाना घटनाक्रम हो। जुन निर्णायक हुदैन। जस्तो कि महाभारतको कथामा पाण्डव र कौरवबीचमा सत्य र असत्यबीचमा ठुलो युद्ध भयो। ऊनीहरुबीच धेरै मतभेदहरु थिए। दुवैले आफ्नो कुरा सत्य सावित गर्न धेरै वादबिवाद, लडाई र झगडा गरे। एक अर्काको खुब खण्डन गरे विभिन्न हत्कण्ठाहरु अपनाए।
लाखौ करोडौँ मारिए यसरी कयौ पटकका तर्क बितर्क बादविबाद झगडा लडाई र आन्दोलनले अन्तत द्धन्द्धको समाप्ति भयो र समग्र युद्धको हार जीतको छिनोफानो भयो। यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने त्यो लामो र विशाल युद्धमा थुप्रै पटकका तर्क बितर्क, बादविबाद झगडा लडाई र आन्दोलनमा कौरवहरुले पनि जितेको थिए। पाण्डवहरुलाई बाच्न र टिक्न पनि धौ धौ पारेका थिए। कौरबहरुले अब संसार हाम्रोमात्र हो भन्ठानेर विजय उत्सव मनाएका थिए। तर कौरबहरुले कयौ पटक जित्ता जित्तै पनि अन्तत समग्र युद्ध ऊनीहरुले हारे र पाण्डबहरुले जिते।
अनि कौरबहरुको अस्तित्व बिलाएर गयो र पाण्डबहरु आजसम्म पनि सत्यको जितको प्रतिक बनेर रहिरहेका छन हो यो घटनाबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि लडाई भनेको एउटा अंश वा टुक्रा हो भने युद्ध भनेको पुर्ण भाग हो। भन्नुको मतलव के हो भने हामी मानिस पनि आफ्नो जीवनका स-साना प्राप्तिलाई नै सफलता ठान्छौ र त्यहि साना कुराको पछि लागिरहन्छौ। जस्तो कि हामीलाई जीवनमा पैसा कमाउनु घर बनाउनु जागिर खानु र मान्छेलाई आफ्नो पक्ष र वशमा पार्नुलाई नै जीवनको सफलता ठान्छौ र त्यहि पाउनलाई जस्ता सुकै हर्कत पनि गर्छौ र साम, दाम, दण्डभेद सबै गरेर भए पनि त्यो कुरा पाउन मरिहत्ते गर्छौ। तर अन्तत हामी ती सबै कुरा पाएर पनि चिन्तित हुन्छौ, दुःखि हुन्छौ राति सुत्न सक्दैनौ मन भतभति पोल्छ र सारा जिन्दगी बर्बाद बनाउछौ।
हो हामीले जीवनमा पैसा कमाउनु , घर बनाउनु , जागिर खानु मात्र सफलता होइन । यी त जीवनका स-साना पाप्ति हुन । यसरी हामीले चाहे जस्ता धेरै प्राप्ति पाएर पनि हामी बास्तविक सफल हुन सक्दैनौ । किनकि माथि भनेझै सफलता भनेको लडाई जित्नु मात्र होइन युद्ध जित्नु हो।
त्यसो भए के हो त सफलता? अब हामी गम्भिरतापूर्वक मनन गरौ । माथिका सन्दर्भहरु नियालौ । जस्तो कि पाण्डबहरुले सारा सम्पति जुवाको नाममा गुमाउनु पर्यो, १२ बर्षसम्म बनवास र गुप्तबासको सामना गर्नु पर्यो । कहिले बिष त कहिले आगोको नियोजित सामना गर्नु पर्यो ।